Jinni-Boqor oo jaantarogtay!
Cabdi Cabdulle Saciid (Jinni-Boqor) oo ka mid ah Baarlamaanka Maamulka Mbagathi ayaa shalay ku soo bandhigay bogagga ay Soomaalidu ku leedahay internetka maqaalad uu kaga hadlayo maamulkii Madaxweyne Aaden Cabdulle Cusmaan. Wuxuu ku eedeeyey maamulkii Marxuumka dhintay inuu mas�uul ka ahaa inay xukunka dalka faramarooqsadaan askartii militariga. Iyadoo xaqiiqadu ay taas ka soo horjeeddo ayaa Jinni-Boqor wuxuu ka weecday inuu runta abbaaro, taasoo ah in askartu ay dalka qabsatay markii maamulkii Cabdirashiid Cali Sharma�arke uu xalaashaday musuqmaasuqa, laaluushka iyo boobka hantida dadweynaha.
Madaxweyne Aaden Cadde oo jooga gurigiisa ayaa nin gacanyare u ahaa wuxuu u soo sheegay in la dilay Cabdirashiid Cali Sharma�arke oo lagu dilay Laas Caanood, uuna dilay askari isaga waardiyeynayey, wuxuuna ku jawaabay sida la sheego, �Cabdirashiid wuxuu u dhintay laaluushkii uu ku raadiyey xukunka markii aanu tartannay.�
Dhab ahaantii, Marxuum Aaden Cadde wuxuu sameeyey qaladaad siyaasadeed oo mixnad ku noqday xal u helidda dhibaatada Soomaaliya, qaladaadkaasna waxaa ka mid ahaa isku beddelkii Cabdirashiid iyo Cabdirisaaq Xaaji Xuseen. Abwaan ka gilgishay tallaabada qallafsan ee uu ku dhaqaaqay Madaxweynaha ayaa dareenkiisa ku cabbiray shirib, wuxuuna yiri �Marna Rashiid, marna Risaaq, inta kale ma rootiyaa?�
Dad badan oo waxgarad iyo aqoonyahanno isugu jira ayaa Madaxweyne Aaden Cadde ugu tagay talooyin ka hor intuusan magacaabin Cabdirashiid Cali Sharma�arke. Waxay kula taliyeen marka la fiiriyo mansabka halganka iyo maamulka xisbiga SYL inuu mudan yahay in Ra�iisal Wasaare loo magacaabo Cabdullaahi Ciise Maxamuud. �Haddii aadan magacaabayn Cabdullaahi, magacaw Cigaal,� ayay ahayd talada kama dambaysta ah ee la siiyey.
Laakiin, Madaxweyne Aaden Cadde dhegaha ayuu suuf gashaday, wuxuuna goostay inuu qaato go�aan ka duwan talooyinka lagu biiriyey. Wuxuu bishii July 1960-kii Ra�iisal Wasaare u magacaabay Cabdirashiid Cali Sharma�arke. Markey iska hor yimaaddeen ayuu sannadkii 1964-kii wuxuu xilkii ka xayuubiyey Cabdirashiid, wuxuuna kaddib Madaxweynuhu u magacaabay Cabdirisaaq Xaaji Xuseen inuu noqdo Ra�iisal Wasaare.
Waxaa dhacday in 1967-kii uu Cabdirashiid Cali Sharmaarke xilkii madaxtinimo kula tartamay Aaden-Cadde, kagana guuleystay jagadii. Laakiin, Cabdirashiid kuma guuleysan cod aqlabiyad leh ee wuxuu Aaden-Cadde kaga guuleystay hal cod oo keliya. Intii ay socotay ololaha doorashada wuxuu Aaden Cadde diiday inuu madaxtinimo labaad ku raadiyo lacag, wuxuuna ka gaabsaday inuu sameeyo wax ballanqaad ah.
Madaxweyne Aaden-Cadde, oo la rumeysan yahay inuu yahay Madaxweynihii ugu fiicnaa ee soo mara Soomaaliya, waxaa kale oo uu doorashada ku waayey isagoo ay ka hor yimaaddeen dadkii uu garabsan lahaa iyo isaga oo diiday in la musuqmaasuqo hannaanka doorashada. Inta la ogyahay, waxay ahayd markii ugu horreysay ee nin siyaasi ah uu doorasho madaxtinimo ku raadiyo lacag iyo laaluush, kuna soo baxo Soomaaliya.
Sida taariikhda adduunyadu ay weriso, Madaxweyne Aadden Cadde wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee Madaxweyne ka soo noqday waddan ku yaalla Africa ee xukunka isagoo ku yimid hab dimoqraadi ah uga dega isla habkii dimoqraadiga ahaa. Markii uu xukunka ka degay, laguma sagootin hab-maamuuskii uu mudnaa ee waxaa Radio Muqdisho laga sii daayey heestii uu allifay Maxamed Warsame Al-Qasaali;
Ilaahayga weyn baa amarkiisu fulayaa
Inaad adigu talisaad ayaamahaan is moodee
Waa adduunyoo, illeyn aayo ma lehee
Ubixii baxaayey, sowdigaan abaarsaday
Nabsi waa abaar cuna, araxda iyo feeraha
Waa mici abeesoo, aayahaa ku logada
Ma illoobin goortaad, nabaddeennii aastee
Arxan mid ah ku deysee
Xiddigeygii aasnaa, ururkuu ku biiroo
Soo celi iftiinkoo, ili qabatay weeyee
Alle magane waan rabay, inay kugu adkaatoo,
Cidna eersan weydee
Waa adduunyoo, qosol kuma idlaatee
Ila arag, ax iyo wey, inay urugo leedahay,
Ooy oohin leedahay
Si kasta oo loo duro, maamulkii Madaxweyne Aaden Cadde wuxuu ahaa maamulka keliya ee soo maray Soomaaliya ee aan record-kiisa lagu haynin qof maxbuus ah oo loo xiray dhinaca siyaasadda (political detainee). Prof Axmed Ismaaciil Samatar iyo Prof Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa waxay soo wadaan buug ay u bixiyeen �The First African Democrat� oo ay kaga hadlayaan maamulkii Aaden Cadde oo ahaa maamul ay dadku si furan uga doodi karaan xaaladda dalka iyagoon wax cabsi ah ka qabin dowladda.
John F. Kennedy ayaa wuxuu yiri, �Dowlad ka baqeysa inay u oggolaato dadkeeda inay runta iyo beenta ku falanqeeyaan (xukmiyaan) suuqa furan, waa dowlad ka baqeysa dadkeeda.�
Buugga ay qorayaan labada Professor wuxuu ka warrami doonaa dadaalkii iyo dimoqraadiyaddii Madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan. Inkasta oo aanan ogeyn inay cabqariyiintu ku soo hadalqaadi doonaan u roonaantii Aadan Cadde uu u roonaaday xididka, haddana waxay ila tahay wuxuu faaqidi doonaa islaamnimadii iyo iimaankii Madaxweynaha.
Marxuum Aaden Cadde wuxuu caan ku ahaa hufnaan, caddaalad iyo dulqaad. Wuxuu kaloo caado u lahaa inuu Ilaaheey u baryo Soomaalida. Intuu xukunka hayey ayuu galab galbaha ka mid ah wuxuu bannaanka uga soo baxay dhismaha madaxtooyada, wuxuuna gacmaha u taagay cirka, isagoo yiri, �Ilaahayoow, Soomaalida ka dhig bini�aadam.� Wuxuu Alle weydiisanayey in Soomaalida oo uu ka waayey dhaqan bini�aadam in Alle u yeelo dhaqanka bini�aadamka.
Jinni-Boqor wuxuu iska indha-saabay, hiilo iyo hagar mid ay ka ahaydba, inuu tilmaamo bililiqadii boobka bankiyada ee madaxdii maamulkii Cabdirashiid uu sutiga u hayey oo ku sifooobay is daba marinta gargaarkii caalamku ugu deeqayey in lagu hormariyo Soomaaliya, waxaana ay gaareen heer ay jaraa�idka adduunku ugu yeeraan Soomaaliya �Dhallaankii sadaqada ku noolaa.�
Shaki la�aan, Maamulkaas Aaden Cadde ka dambeeyey ayuu ahaa kii baa bi�iyey rajadii ay ummadda Soomaaliyeed ka qabtay in la isu doono Soomaaliweyn. Wuxuu ahaa maamul laga necbeystay guri walba oo ay Soomaali ku nooshahay. Dhaxalkiisii wuxuu noqday in dadweynaha Soomaaliyeed, iyagoo ogsoon cawaaqibka xukun militari ah, inay si weji furan leh ku soo dhoweeyaan askartii xukunka marooqsatay.
Markaas wixii ka dambeeyey Soomaaliya faraha ayay ka baxday oo waxay noqotay hal nin iyo caa�iladiisa oo dadkii iyo dalkiiba ay calaacashooda ku jiraan (one man rule with one clan apparatus). Waxaaba dhacday, sida ay leeyihiin taariikh-qorayaasha ajnabiga ee sida baahsan wax uga qora arrimaha Soomaaliya, in xukunkii dalka ay isku qabsadeen labadii bahood ee Maxamed Siyaad Barre (Bah Khadiijo iyo Bah Dalaayo).
Taariikhda Soomaaliya ayaa waxay tahay taariikhda keliya ee adduunka ee nin kasta siduu u jecel yahay uu u haysto, taasoo ay ugu wacan tahay iyadoo aanay jirin wax qoran oo la isku raacsan yahay. Inay xaqiiqdu sidaas tahay waxaa caddeynaya weerarka Jinni-Boqor uu ku qaaday marxuum usbuucaan god-galay oo xabaashiisu ay weli qoyan tahay.